चेसको वृत्त फैलाएका जोशी- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
‘राजेशहरि जोशीको निधन नेपाली चेसका लागि ठूलो क्षति हो । सम्भवतः उनी जत्तिको व्यक्तित्व नेपाली चेसले पाउने छैन ।’
असार १, २०७८ हिमेश
काठमाडौँ — फुटबल र क्रिकेट त त्यसै भइहाले, नेपाली मिडियामा प्रायः यिनै दुई खेल बढी छाउने गर्छ । पछिल्लो समय भलिबल भयो । त्यसपछि ? ठ्याक्कै उत्तर दिन गाह्रो हुनसक्छ, तर त्यसको नजिक पुग्ने खेल हो, चेस (बुद्धिचाल) ।
यसमा ग्ल्यामर छैन । न त यसले कुनै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि नै हात पारेको छ । तर नेपालमा यो चलायमान खेल हो । यो खेलमा केही न केही भइरहन्छ । यसको कारण हो, यो खेललाई असाध्यै माया गर्ने केहीको पागलपन ।
यस्तै नेपाली चेसलाई असाध्यै माया गर्नेमा पर्थे राजेशहरि जोशी । उनको पृष्ठभूमि खेलाडीको होइन । उनी पदाधिकारीका रूपमा नेपाली चेसमा प्रवेश गरे, यसलाई एउटा उचाइ दिए । अहिले यिनै जोशी एकाएक हराएका छन् । हराएको के अर्थमा भने नेपाली चेसलाई स्तब्ध पार्दै नेपाल बुद्धिचाल संघका पूर्वअध्यक्ष जोशीको आइतबार निधन भयो । उनी ६३ वर्ष थिए । अझै धेरै गर्नसक्थे नेपाली चेसमा । पाटन सुन्धारास्थित घरमा छँदै आइतबार साँझ हृदयघात भएको थियो ।
भनिन्छ, चेस त्यस्तो एकमात्र खेल हो, जससँग एकपल्ट नजिक हुनुपर्छ, त्यसपछि टाढा हुन सकिन्न । यसैमा झुम्मिने हुन्छ । त्यो पनि एकोहोरो । केही नभए पनि १५ वर्षअगाडि उनी औपचारिक रूपमा नेपाली चेससँग जोडिएका थिए, मकवानपुर चेस संघको उपाध्यक्ष भएर । त्यतिबेला नेपालमा पहिलोपल्ट रेटिङ प्रतियोगिता भएको थियो । उनी यसै अवसरमा यो खेलसँग जोडिए । २०६४ सालमा उनी पहिलोपल्ट चेस संघको अध्यक्ष भए ।
उनले दुई कार्यकाल नेपाली चेसको नेतृत्व गरे । उनको अध्यक्षता २०७२ सालसम्म चलेको थियो । ‘नेपाली चेसका लागि यो नै त्यो समय हो, जतिबेला यसले उडान लिएको थियो । एक प्रकारको निर्णायक परिवर्तनबाट गुज्रिएको थियो,’ अनुभवी खेलाडी तथा चेस व्यक्तित्व सुजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ मान्छन् । नेपाली चेस संघको आधिकारिक इतिहास पनि धेरै लामो छैन । नेपाल बाघचाल र बुद्धिचाल संघ २०३५ सालतिर अस्तित्वमा आएको थियो, ०४९ पछि चेसको मात्र आफ्नै अलग संघ बन्यो । त्यसयता अहिलेसम्म पाँच अध्यक्ष बने । जोशी चौथो अध्यक्ष थिए । उनले नेपाली चेसमा कायापलट गरे ।
‘जोशीको निधन नेपाली चेसका लागि ठूलो क्षति हो । सम्भवतः उनी जत्तिको व्यक्तित्व नेपाली चेसले पाउने छैन,’ श्रेष्ठ मान्छन् । मखन चेस क्लबका श्रेष्ठको यो दाबी ठीक पनि हो । यो के अर्थमा भन्दा जोशीले नेपाली चेसवृत्तलाई ठूलो पारे । त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे । एकप्रकारले उनमा पर्याप्त कूटनीतिक चलाखी थियो, नेपाली चेसका लागि त्यसको भरपूर प्रयोग गरे ।
चेस संघका अध्यक्ष छँदा एक प्रसंगमा जोशीले यस संवाददातासँग भनेका थिए, ‘नेपाली चेसलाई विकास गर्नु छ भने घरमै मात्र सीमित रहेर हुन्न । नेपाली चेसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि उत्तिकै मजबुत बनाउनुपर्छ ।’ हो पनि । यसैक्रममा उनी एसियाली जोनल–३.२ को एक कार्यकालका लागि अध्यक्षसमेत बने । भारत छाडेर यसमा दक्षिण एसियाली देश सदस्य हुने गर्छन् । नेपाली चेसका कोही व्यक्ति त्यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय पदमा पुगेको यो एक्लो उदाहरण हो ।
पछिल्लो समय उनी अन्तर्राष्ट्रिय चेस महासंघको इथिक्स कमिटीका सदस्य पनि थिए । उनको अध्यक्ष कार्यकालमा दुई ठूला प्रतियोगिता नेपालमा भए । पहिलो त ग्रान्ड मास्टर्सको प्रतियोगिता थियो भने अर्को एसियाली जोनलकै । उनको पालामा नेपाली खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि बाक्लो रह्यो । मनीष हमाल फिडे मास्टर भएको उनकै कार्यकालमा हो । उनले नेपाली आर्बिटरको विकासका लागि उत्तिकै भूमिका खेले ।
पेसाले इन्जिनियर र नेपाली सहकारीमा पनि उत्तिकै दख्खल तथा योगदान दुवै रहेका जोशीको अर्को एउटा ठूलो विशेषता छ । त्यो उनले नेपाली चेसमा व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरे, त्यसको प्रतिफल खोजेनन् । व्यक्तिगत रूपमा उनी उत्तिकै भलाद्मी थिए । प्रायः उनको मुहार हँसिलो रहने गर्थ्यो । नेपाली चेससँग लामो समयदेखि कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध ज्ञानेन्द्र खाइजुले ठीकै भनेका छन्, जोशीको निधन भनेको नेपाली चेसले अभिभावक गुमाएजस्तै हो । नेपाली चेस उनीप्रति सधैं ऋणी रहनेछ ।
प्रकाशित : असार १, २०७८ ०९:०३
प्रयोग दीर्घकालीन कि रहरमात्रै ?
नेपाली फुटबलमा समय–समयमा नयाँ खेलाडीलाई मौका दिने र नयाँ टिम बनाउने चर्चा हुने गर्छ । तर जति जोसले चर्चा हुने गर्छ, त्यत्तिकै कम समयमा यो सेलाउने पनि गर्छ । यो अहिलेको मात्र रोग होइन । यस्तै चर्चा फेरि एकपल्ट अहिलेका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले गरेका छन् । एन्फाको काम हो, यसलाई चर्चामै सीमित नराखौं । केही ठोस गरौं ।
जेष्ठ १९, २०७८ हिमेश
काठमाडौँ — अचेल फुटबल प्रशिक्षकको खेल भएको छ । यसअघि पनि फुटबलमा प्रशिक्षकको महत्त्व कम थिएन । तर अहिले प्रशिक्षक हाबी हुन थालेको छ यो खेलमा । इराकविरुद्धको खेल गुमाएपछि नेपाली टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले माफी मागे, किनभने उनकै भाषामा यो हारको सबै जिम्मेवारी प्रशिक्षककै हो, खेलाडीको होइन ।
इराकविरुद्ध २–१ को अग्रता लिएर अन्ततः त्यही खेल ६–२ ले गुमाउनुमा नेपाली फुटबललाई पछिसम्म पछुतो पक्कै रहनेछ ।
जेहोस, नेपालले भर्खरै इराकजस्तो एसियाली फुटबल शक्तिसँग खेलेको छ । अब नेपालको ध्यान यसपल्टको विश्वकप छनोटको अन्तिम तीन खेलमा हुनेछ । यी छनोट खेल्दा जहाँ नेपालको ध्यान आफ्नो समूहको चौथो स्थानमा बलियो रहने हुनेछ, त्यहीं एक नजर सेप्टेम्बरमा बंगलादेशमा हुने भनिएको साफ च्याम्पियनसिपतर्फ पनि छ । अहिलेको खेलमा राम्रो गर्न सक्यो भने एसिया कप छनोटको बाटोमा के कस्तो गर्नसक्ने हो, त्यो सम्भावना खुल्नेछ ।
प्रशिक्षक अलमुताइरीकै भाषामा नेपालको अर्जुनदृष्टि साफ च्याम्पियनसिपमै हुनुपर्नेछ । नेपाल उपाधि जित्न सक्षम छ, भलै यो प्रतियोगिताको इतिहासमा नेपालले सेमिफाइनल पनि काट्न सकेको छैन । अनि यसपल्टको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल फाइनल पुगेन भनेमात्र होइन, उपाधि नै जित्न सकेन भने अलमुताइरीले भनिसकेका छन्, आफू नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक रहन योग्य छैनन् भन्ने सिद्ध हुनेछ । त्यो भनेको उनले नेपाली टिम छाड्ने छन् ।
अहिले उनी नयाँ नेपाली टिम बनाउने बाटोमा छन् । त्यसैले आफ्नो मनले चिताएका केही नयाँ खेलाडीलाई प्रयोग गर्ने मनसायमा छन् । यो उनको योजना नै भन्दा हुन्छ । उनले विश्वकप छनोटका बाँकी खेललाई चयन गरेको २३ सदस्यीय टिम अहिलेसम्मकै सबैभन्दा युवामध्ये एक रहेको छ । जति नयाँ अनुहारले टिममा प्रवेश पाएका छन् वा जति फेरि दोहोर्‍याएर टिममा फर्केका छन्, ती पक्कै त्यसलाई हकदार नै होलान् । अलमुताइरीले त्यसै हचुवा ढंगले निर्णय गरेका त पक्कै होइनन् ।
उनको यो निर्णयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि उत्तिकै छ । विशेषतः युवा खेलाडीमा जोड दिएरमात्र त हुन्न होला । फुटबलमा अनुभव भन्ने तथ्य त केही पक्कै हो । तर अगाडि भनिएजस्तै, जतिबेला फुटबल प्रशिक्षकको खेल भइसकेपछि यहाँनिर अलमुताइरीको निर्णयप्रति सम्मान गर्नु नै पर्छ । अझ त्यतिमात्र होइन, सिद्ध गर्ने पर्याप्त अवसर र समय दुवै उनलाई दिनुपर्छ । नेपाली फुटबलले पाएका उनी अहिलेसम्मकै उच्च अध्ययन गरेका प्रशिक्षक हुन् । उनले जति अध्ययन गरेका छन्, त्यो ठूलै हो ।
यो सबै चर्चाबाट उनलाई एकपल्ट हटाएर नेपाली फुटबलबारे मात्र सोच्ने हो भने केही प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ । नेपाली फुटबलले खाली यस्तै विदेशी प्रशिक्षकलाई नयाँ प्रयोगको अवसरमात्र दिइरहने हो कि साँच्चै दीर्घकालीन सोच बनाउने हो ? अधिकांश फुटबलका ठूला देशको आफ्नै फुटबल खेल्ने शैली छ, तर नेपालमा प्रत्येक नयाँ प्रशिक्षकसँगै नयाँ शैली भित्रिन्छ र उनी बाहिरिएसँगै त्यो शैली पनि बाहिरिन्छ । यस्तोमा प्रश्न हो, प्रयोग दीर्घकालीन कि रहर मात्रै ?
कि नेपाली फुटबल विदेशी प्रशिक्षकका लागि प्रयोग गर्ने, अनुभव बटुल्ने र आफ्नो ‘बायोडाटा’ बढाउने काममात्र हो ? यसका लागि पक्कै केही उदाहरण दिन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले नेपाली फुटबलको इतिहास पल्टाउने हो भने हाम्रो खेल्ने शैली ठ्याक्कै परिवर्तन गर्ने काम पहिलो औपचारिक प्रशिक्षक रुडी गुटेनफडले गरे । लामै समय खर्चेर सानै उमेरबाट खेलाडी उत्पादन गर्न त्यसपछि अर्को जर्मन प्रशिक्षकले काम गरे र उनको नाम हो, होल्गर ओभरम्यान ।
ओभरम्यानकै कारणले त हो, सन् ९० तिर एकै पुस्ताको खेलाडी निर्माण भएको । एन्फा एकेडेमीको स्थापनापछि लगातार खेलाडी भने उत्पादन भए । पछिल्लो समय अहिलेका पुस्ताका खेलाडी उत्पादन गर्न बालगोपाल महर्जन र उपेन्द्रमान सिंहको पनि हात रह्यो । ठ्याक्कै भन्दा नयाँ खेलाडी छिनको छिन त्यसै निस्कँदैन, नयाँ टिम एकाएक बन्दैन । अलमुताइरीको सोच साँच्चै राम्रो टिम बनाउने हो भने उनको ध्यान उमेर समूहबाटै राम्रा खेलाडी निकाल्ने हुनुपर्छ ।
फेरि एकपल्ट इतिहासमै फर्कने हो भने सन् २००५ मा पुग्नुपर्छ, जतिबेला नेपाली फुटबलले एक कालखण्डको परिवर्तन देखेको थियो । त्यो वर्ष नेपालले पाकिस्तानमा भएको साफ च्याम्पियनसिप खेलेको थियो र त्यही प्रतियोगिताबाट नेपाली फुटबलमा एकेडेमीका खेलाडीले प्रवेश पाए । अनि ओभरम्यानले उत्पादन गरेका खेलाडी पुस्ताको यात्रामा पूर्णविराम जस्तै लाग्यो । त्यसअगाडि सन् २००३ मा नेपालले बिर्सनलायक एसिया कप छनोट खेलेको थियो । त्यसमा बेहोरेको खराब प्रदर्शनका कारण नेपालले दुई वर्षजति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल फिटिक्कै खेलेन । विश्वकप छनोटसमेत त्यागेको थियो । हामीसँग सन् २००५ यता नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई लिएर मिनेट मिनेटको हिसाब छ । यसैलाई विश्लेषण गरेर भन्न कर लाग्छ, प्रयोग दीर्घकालीन रहने गरेको छैन, खाली रहरमात्र बनेको छ । सन् २००५ यता अलमुताइरीसम्म नेपालले पाएका प्रशिक्षक संख्या १६ पुगेको छ । यस्तोमा १६ वर्षमा १६ प्रशिक्षक ।
यी प्रशिक्षकको सूची नै बनाऔं न । तोसिहिरो सिवाजावा, श्याम थापा, भीम थापा, थोमस फ्लाथ, विराटकृष्ण श्रेष्ठ, योगम्बर सुवाल, कृष्ण थापा, ग्राहम रोबर्ट्स, ज्याक स्टेफानोस्की, राजुकाजी शाक्य, ध्रुव केसी, प्याट्रिक ओसेम्स, बालगोपाल महर्जन, ग्योतुकु कोजी र योहान कालिन । यसमध्ये एक प्रशिक्षक एकै खेलमात्र टिके, केही प्रशिक्षक एकै प्रतियोगितामात्र टिके अनि केही प्रशिक्षकको काम ‘खाली ठाउँ भर्ने’ मात्र थियो । पछिल्लोपल्ट ओसेम्सले पनि नयाँ खेलाडी र नयाँ सूत्र बनाए, तर छिनमै हरायो ।
नेपाल छाड्नुअगाडि उनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई आफ्नो योजना पनि बुझाएका रहेछन् । तर सुन्ने काम भएन, लागू गर्ने त परको कुरा । ओसेम्सले निहुँ पाए, नेपाल छाडे । फेरि सन् २००५ मै फर्कने हो भने त्यो वर्ष खेलेको साफ च्याम्पियनसिपका तीन खेलमा जापानी प्रशिक्षक सिवाजावाले १० खेलाडीलाई डेब्यू गराए अनि कराँचीबाट सिधै जापान उडे । पक्कै उनका योजना त थिए होलान्, तर सम्भवतः एकपल्ट पनि दोहोर्‍याएर नेपाली फुटबलबारे सोचेनन् होला ।
यहाँनिर फेरि किन साफ च्याम्पियनसिपको प्रसंगभन्दा त्यसयता इराकविरुद्धको खेलसम्म नेपालका लागि डेब्यूको अवसर पाउने खेलाडी संख्या ९९ पुगेको छ । भारतविरुद्ध कराँचीमा डेब्यू गर्ने विकास मल्ल पहिलो खेलाडी मान्ने हो भने मनीष डाँगी ९९ औं खेलाडी । अब विश्वकप छनोटमा अवसर जुर्‍यो भने सय खेलाडीले डेब्यू गर्नेछन्, अझ त्यसमा संख्या बढ्न पनि सक्छ । यस्तोमा पछिल्लो १६ वर्षमा १६ प्रशिक्षक मात्र होइन, ९९ नयाँ खेलाडी थपिए ।
यी खेलाडीमध्ये कतिपय एकै खेलमै सकिए, केहीले एउटा प्रतियोगितासम्म खेले । दोहोरो संख्याको खेल नखेलेका त झन् कति कति । यसमध्ये केहीले कमै उमेरमा अवसर पाए, ‘बर्न आउट’ को सिकार भए र हराए । धेरैले त फुटबल खेल्न छाडिसके । केही स्वार्थी पनि निस्के, नेपालका लागि खेलेको गलत फाइदा उठाए र विदेश पलाएन भए । केही कुनाममा फसे । खेलाडीमा लगानी कहाँनिर कसरी फसेको छ, त्यो पनि हेर्ने कि ? यस्तोमा डेब्यू गराएको श्रेय लिने कामले मात्र केही गर्ने रहनेछ । यसमा दोष सिधा सिधा एन्फाकै हो ।
एन्फालाई ‘प्रशिक्षकले लामो मौका पाउनुपर्छ’ र ‘खेल्ने आफ्नो विशिष्ट शैली हुनुपर्छ’ हेक्का कहिले पनि भएन, भए नि लागू गर्न सकेन । फेरि यति धेरै खेलाडीमा लगानी गरेर एन्फाले खासै केही ठोस पाउन सकेन । अब त यस्तो भनेर सधैं यस्तै रहनु त भएन । सम्भवतः नेपालले अहिले एक अब्बल दर्जाका प्रशिक्षक पाएका छन् । उनको प्रो–लाइसेन्सले यस्तै भन्छ । उनी नेपाली फुटबल समर्थकलाई पागल मान्छन् अनि आफूलाई यो खेलका अझ ठूलो पागल ठान्छन् । अबको समय ठीक छ, उनको नेतृत्वमा दीर्घकालीन योजना बनाउने । नेपाली फुटबलका लागि उपयुक्त शैली विकास गर्ने । उमेर समूहको फुटबलमा लगानी गर्ने र राम्रा राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्ने ।
यसैलाई सुहाउने घरेलु फुटबल ढाँचा बनाउने । यहाँनिर अलमुताइरीबाट पनि अपेक्षा के छ भन्दा उनले नेपाली फुटबलमा लामै समय दिनुपर्छ । औपचारिक कुराकानीमा त उनी यस्तै आशय पोख्छन् । एन्फाले पनि उनलाई राम्रैसँग समर्थन गर्नुपर्छ । नत्र समय समयमा सबैको रहरमात्र किन पूरा गरिरहने ?
सन् २००५ यता नेपालका लागि डेब्यु गर्ने खेलाडी
विशाल राई ‘ए’
विशाल राई ‘बी’
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०८:०८